06/11/14 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Wednesday, June 11, 2014, under ကျန်းမာရေး | No comments
အမျိုးသမီးတွေဟာ ကလေးယူချင်တဲ့အခါ မျိုးဥကြွေတဲ့ရက်ကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ပါက ပိုမိုအဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်။ကလေးရဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်သလို အခွင့်အရေးပိုများတယ်။ ဆေးပညာအရ မျိုးဥကြွေမယ့်ရက် ကြိုတင် သိရှိနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းမှ အရည်ကို စမ်းသပ်ခြင်း၊
ဒီထဲမှာ အလွယ်ကူဆုံးက အပူချိန်တိုင်းခြင်းနဲ့ ဆီးစစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆီးစစ်ခြင်းဟာ မျိုးဥကြွေရက်သိရှိဖို့ အတွက် ပိုမိုအသုံးဝင်သလို ပိုမိုတိကျတာတွေ့ရပါတယ်။
LH (luteinizing hormone)ဆိုတာ
ဦးနှောက်မှာရှိတဲ့ ပစ်ကျူထရီဂလင်း(pituitary gland)ကနေ luteinizing hormoneဆိုတာကို ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ ovaryမျိုးဥအိမ်ကနေ eggမျိုးဥထုတ်လုပ်ဖို့ LHဟော်မုန်းက လှုံ့ဆော်ပေးရတယ်။ မျိုးဥအိမ်က မျိုးဥထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ovulation မျိုးဥကြွေခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ မျိုးဥဟာ ၂၄နာရီအတွင်း sperm သုတ်ကောင်နဲ့ ပေါင်းစပ်တဲ့အခါ fertilization မျိုးအောင်ပြီး ကလေးရနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဟော်မုန်းဓာတ်တွေဟာ သွေးထဲမှာများလာတဲ့အခါ ဆီးထဲမှာလည်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
LH surge ဆိုတာ
သွေး(သို့) ဆီးထဲမှာ LHပမာဏရုတ်တရက် များလာတာကို ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုများလာပြီး မကြာမှီ မျိုးဥကြွေတော့မယ်ဆိုတာ သိရှိနိုင်တယ်။ LH surgeဖြစ်ပြီး ၂၄နာရီမှ ၄၈နာရီအတွင်း မျိုးဥကြွေတတ်ပါတယ်။ မျိုးဥကြွေတဲ့ရက်တွေမှာ အတူနေရင် ကလေးရဖို့ အခွင့်အလန်း ပိုများစေပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ မျိုးဥတွေဟာ ၂၄နာရီအတွင်း သုတ်ပိုးနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်မှ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။ဒါ့ကြောင့် ကလေးလိုချင်သူတွေဟာ LH surgeဖြစ်ပြီး ၂၄နာရီနောက်ပိုင်းနဲ့ ၄၈နာရီအတွင်း အတူနေသင့်တယ်။
Urine LH surge test ဆီးစစ်ခြင်း
Test strip ဆီးစစ်တံ သုံးပြီး စစ်နိုင်သလို cassette ဆီးစစ်ပစ္စည်း သုံးပြီး စစ်ဆေးနိုင်တယ်။ test stripဆီးစစ်တံက ဈေးပိုချိုမယ်။ တစ်ဗူးမှာ ၅ချောင်းမှ ၇ ချောင်းထိပါနိုင်တယ်။ အဖြေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသိနိုင်တယ်။LHစစ်တဲ့အခါ မနက်ခင်းသွားတဲ့ ဆီးနဲ့ မစစ်သင့်ဘူး။ အဖြေမှားတတ်တယ်။ မနက်ပိုင်းမှာ ဟော်မုန်းအများစုဟာ synthesis လုပ်ကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မနက် ၁၀နာရီမှ ည ၈နာရီအတွင်း သွားတဲ့ဆီးကို စစ်ကြည့်ရတယ်။ အကောင်းဆုံးက နေ့လည် ၁၂နာရီနောက်ပိုင်းနဲ့ ညနေ၄နာရီအတွင်းသွားတဲ့ဆီးမျိုးကို စစ်ဆေးသင့်တယ်။ ဆီးမစစ်ခင် ၂နာရီအတွင်း အရည်ကို လျှော့သောက်သင့်တယ်။ ဆီးစစ်တဲ့အခါ ဆီးရောင်ဝါနေရင် ပိုကောင်းတယ်။ LHစစ်ဖို့အတွက် ဆီးအောင့်ထားဖို့ မလိုအပ်ဘူး။
Test strip ဆီးစစ်တံနဲ့ စစ်ဆေးခြင်း
ညနေပိုင်းသွားတဲ့ဆီးကို သန့်စင်တဲ့ခွက်တခုနဲ့ ခံယူပါ။
Test stripကို ဆီးထဲသို့ stop line အနက်လိုင်းရောက်အောင် တည့်တည့်နှစ်ပါ။
၅စက္ကန့်ခန့်နှစ်ပြီး စားပွဲပေါ် တင်ကြည့်ပါ။
၅မိနစ်အတွင်း ပေါ်လာသောအဖြေကို ဖတ်ပါ။
Control တလိုင်းသာပေါ်လျှင် negative ဖြစ်ပြီး နှစ်လိုင်းပေါ်လျှင် LH surge positiveဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ တလိုင်းမှာ အရောင်မှိန်နေလျှင် negative ဟုသာ သတ်မှတ်ရပါမယ်။
Cassette ဆီးစစ်ပစ္စည်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း
-ညနေပိုင်းဆီးကို သန့်စင်သောခွက်တခုနဲ့ ခံယူပါ။
-test kit အထုပ်ထဲမှာ ပါဝင်သော dropperယူပြီး ဆီးအနည်းငယ် စုပ်ယူ့ပါ။
-ထို့နောက် cassette boxထဲသို့ ဆီး၅စက်ခန့် ထည့်ပါ။
-အဖြေကို ၁၀မိနစ်အတွင်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ၁မိနစ်အတွင်း အဖြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
-Control တလိုင်းသာပေါ်လျှင် negative ဖြစ်ပြီး နှစ်လိုင်းပေါ်လျှင် LH surge positiveဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ တလိုင်းမှာ အရောင်မှိန်နေလျှင် negative ဟုသာ သတ်မှတ်ရပါမယ်။
စစ်တဲ့အခါ မိမိရာသီစက်ဝန်းကိုကြည့်ပြီး စစ်ဆေးရပါတယ်။ ပုံမှန် ၂၈ရက်တစ်ခါ ရာသီလာသူတွေဟာ အလယ်ရက်တွေမှာ မျိုးဥကြွေတတ်ပါတယ်။ ၂၈ရက် ရာသီလာသူတွေဟာ ၁၁ရက်မှ ၁၄ရက်အတွင်း မျိုးဥကြွေတတ်တယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက်တော့ မျိုးဥကြွေရက်မတူညီကြဘူး။ တခါတရံ ရာသီလာပေမယ့် မျိုးဥမကြွေတာ၊ LH surge မဖြစ်တာမျိုးတွေ့ရတတ်တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုတယ်။ တခါတရံ LH surgeဖြစ်ပြီး အတူနေပေမယ့် ကလေးမရတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကလေးရဖို့ဆိုတာ တခြားအခြေခံအကြောင်းအရာတွေလည်း လိုအပ်သေးတယ်။ မသေချာရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ကောင်းတဲ့အချက်က ဆီးစစ်ရတာ လွယ်ကူသလို အဖြေဟာ ၉၉.၈ရာခိုင်နှုန်း မှန်ကန်တယ်။ဆီးထဲမှာ အနည်းဆုံး LH ပမာဏ 20mIUပါရင် positiveရှိတယ် လို့ပြမယ်။ တရက် တကြိမ်ဆီးစစ်တာနဲ့ လုံလောက်တယ်။ ကိုယ်ဝန်မရသေးရင် နောက်ရာသီစက်ဝန်းတွေမှာလည်း ထပ်မံစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်သေးတယ်။ ၆လအတွင်း ကိုယ်ဝန်မရရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်တယ်။
ရာသီစက်ဝန်း ဘယ်ရက်တွေမှာ စတင်စစ်ဆေးမလဲ။
၂၁ရက်တခါ ရာသီလာတဲ့သူတွေဟာ ရာသီစပေါ်ပြီး ၆ရက်မြောက်နေ့မှာ ဆီးစတင် စစ်ဆေးရမယ်။၂၈ရက်တခါရာသီလာသူတွေက ရာသီစပေါ်ပြီး ၁၁ရက်မြောက်နေ့မှာ ဆီးစစ်ရမယ်။ ရာသီမမှန်တာရှိရင် နောက်ဆုံးရာသီလာတဲ့ ၃လအတွင်း ပျမ်းမျှယူပြီး တွက်ချက်ရမယ်။
ပုံမှန်လာတတ်တဲ့ ရာသီရက် ဆီးစစ်သင့်တဲ့ရက်
ဆီးစစ်တဲ့အခါ အနည်းဆုံး ၅ရက်ခန့် ဆက်တိုက်စစ်ဖို့လိုအပ်သလို ထပ်စစ်ဖို့ လိုကောင်းလိုနိုင်တယ်။ positiveပြသည်အထိ ဆက်တိုက်စစ်သွားပါ။ ရာသီပြန်ပေါ်ချိန်အထိ positiveမပြရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
LH စစ်ဆေးတဲ့အခါ အချို့ဆေးတွေဟာ ဆီးအဖြေကို ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။
အီစတိုဂျင်၊ပရိုဂျက်စတီရုန်း၊တက်စတိုစတီရုန်းပါတဲ့ ဟော်မုန်းဆေးတွေဟာ LHပမာဏ လျှော့နည်းစေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တားဆေးတွေက ဆီးအဖြေကို ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ရာသီရက်ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ၂လလောက်စောင့်ပြီးမှ စစ်သင့်တယ်။
Clomipheneပါတဲ့ မျိုးဥကြွေဆေးတွေက LH ပမာဏ များပြားစေမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးဖြတ်ပြီး ၂ပတ်လောက်နေမှ ဆီးစစ်သင့်တယ်။
LH surge testကို တခြားရောဂါတွေအတွက်လည်း သုံးတတ်သေးတယ်။
Posted by drmyochit Wednesday, June 11, 2014, under မှုခင်း |2comments
စည်းကမ်းမဲ့ ယာဉ်မောင်းနှင်မှုများကြောင့် လူသေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော မန္တလေးမြို့တော်တွင် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီကျော်ခန့်က ၆၂ လမ်းပေါ်ရှိ ခုတင် ၃၀၀ ဆံ့ အထူးကု ဆေးရုံကြီးရှေ့၌ မြောက်မှတောင်သို့ အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းနှင်လာသော မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးသည် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို ဝင်တိုက်ပြီး မောင်းနှင် ထွက်ပြေးစဉ် ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ သတ္တမတန်း ကျောင်းသူမှာ ယင်းကားနှင့် ချိတ်ပါသွားကာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုကို တွေ့မြင်၍ ဒေါသတကြီး လိုက်ပါလာသော ဒေသခံများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ အမှုကို မျက်မြင် တွေ့ရှိသူများက ပြောကြားသည်။
“ကားက ဆိုင်ကယ်ကို တိုက်မိလိုက်ပြီး ဆိုင်ကယ် ခါယမ်းသွားတာကို မြင်တော့ မရပ်ဘဲ မောင်းပြေးတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ ဆိုင်ကယ်နောက်မှာ ထိုင်လိုက်လာတဲ့ ခုနစ်တန်း ကျောင်းသူလေးက ကားနဲ့ငြိပါသွားတယ်။ အဲဒါကို ဘေးကလူတွေကမြင်လို့ ဝိုင်းအော်တာတောင် ရပ်မပေးဘဲ မောင်းပြေးသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ဘေးနားက လူတွေအားလုံး ဒီကားနောက်ကို လိုက်ကြတော့ သူနာပြု တက္ကသိုလ်ရှေ့မှာ တခြားကားတစ်စီးကို တိုက်မိပြီး မှောက်သွားတယ်။ နောက်က လိုက်လာတဲ့ လူတွေလည်း အုံနေတာပေါ့။ ပြီးတော့ ရဲတွေ ရောက်လာတယ်၊ ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကလည်း ဒီတိုက်သွားတဲ့ ကားသမားကို ထုတ်ပေးခိုင်းတဲ့အချိန် ရဲတွေနဲ့ ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်သွားတဲ့ အနေအထား ဖြစ်သွားတယ်” ဟု မျက်မြင်သက်သေ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်ခန်းမိုးက ဆိုသည်။
အဆိုပါယာဉ်သည် သူနာပြုတက္ကသိုလ် ရှေ့အရောက်တွင် ရှေ့မှ မတ်တူးယာဉ်ကို တိုက်မိကာ လမ်းဘေးသို့ထိုးကျ တိမ်းမှောက်သွားကြောင်း၊ မိနစ်ပိုင်း အတွင်းတွင် အဆိုပါ ဖြစ်ပွားသည့် နေရာသို့ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့များ ရောက်ရှိလာချိန်တွင် လူဦးရေ ၅၀ ကျော်ခန့်ရှိသော လူအုပ်ကြီးသည် အဆိုပါ ယာဉ်မောင်းနှင်သူကို ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပေးရန် ငြင်းဆန်သည့် အချိန်တွင် လူအုပ်ကြီးက အဆိုပါယာဉ်ကို ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ရာ အဆိုပါ ကားအနီးတွင် ရပ်တန့်ထားသော ရဲအချုပ် ကားကိုလည်း ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ယင်းလူအုပ်ကြီးသို့ ယာဉ်မောင်းနှင်သူကို ပြင်းထန်စွာ အရေးယူပေးမည်ဟု ကတိပေးပြီးမှ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ပြေလည် သွားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာတွင်ရှိနေသူ ဦးနေမျိုးက ပြောကြားသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားသည့် ကလေးငယ်မှာ အ.ထ.က ၁၄ မှ သတ္တမတန်း ကျောင်းသူ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယာဉ်မဆင်မခြင် မောင်းနှင်သူ အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ် ဦးခန့်ညားလှိုင်ကို ယာဉ် ပ/၁၅၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာပုဒ်မ ဥပဒေ ၃၀၄က/၃၃၈ အရ အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့မှူးရုံး တာဝန်ကျ ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော့်ကားကို ဝင်တိုက်သွားတယ်။ တိုက်မိတဲ့အရှိန်နဲ့ တစ်ဖက်လမ်းကြော ရောက်သွားပြီးတော့ မှောက်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ကား ရှေ့ပိုင်းလည်း စုတ်ပြတ်သွားတယ်”ဟု ကားဖြင့်တိုက်ခံရသည့် အခြားကားတစ်စီး၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဦးတင်ထွေးက ပြောကြားသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, June 11, 2014, under မှုခင်း | No comments
အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ကာ ဓားဖြင့်ထိုးသဖြင့် အသက်(၂၀) ကျော်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရဲစခန်းမှတာဝန်ကျ ရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလဒုတိယပတ်အတွင်းကလည်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီမောင်းနှင်သူများ အုပ်စုဖွဲ့ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် အသက်လေးဆယ်ကျော် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီး တစ်လခန့်အကြာတွင် ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အရင်လက ကယ်ရီသမားများ အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ခံရသည့်သူမှာ (၁၉)ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ယခု သေဆုံးသွားသူမှာလည်း (၁၉)ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူပင် ဖြစ်သည်။
“အခုဝိုင်းရိုက်တဲ့ ကောင်လေးတွေက အသက်(၁၉)နှစ်၊ (၂၀)နှစ်ဝန်းကျင်ရှိ ကောင်လေးတွေ။ (၁၃)နှစ် ကောင်လေးတစ်ယောက်တောင် ပါသေးတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ(၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်အောင် ကျော်လမ်းဘေးရှိ ရွှေကောင်းကြွယ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် လက်ဖက်ရည်ထိုင် သောက်နေသည့် ကိုထွန်းနိုင်ဝင်းနှင့် သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးသည် ဘေးဝိုင်းမှအမည် မသိလူငယ် ငါးဦးကို “ဒီဘက်ဝိုင်းကစကားပြောတာ အရမ်းကျယ်တယ်။ ရဲစခန်းအကြောင်းကြားပါ”ဟု ဆိုင်ရှင်ထိုင်သည့် ကောင်တာဘက်သို့ လှမ်းပြောရာမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အထက်ပါ ရဲဝန် ထမ်းက ပြောသည်။
ယင်းသို့ ဆိုင်ရှင်အား လှမ်းအော်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လူငယ်ငါးဦးသည်အပြင် သို့ထွက်သွားပြီး ၁၀ မိနစ် ခန့်အကြာတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကာ ဆိုင်ရှင်ကို လှမ်းပြောသည့် ကိုထွန်းနိုင်ဝင်းနှင့် ကိုဇော်ကို ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ပြီး ကိုသန်းဇော်ဦးကို ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှုကြောင့် ကိုထွန်းနိုင်ဝင်းတွင် ၀ဲချိုစောင်းပေါက်ပြဲ ဒဏ်ရာ၊ ကိုဇော်တွင် ၀ဲချို စောင်း၊ နဖူးထိပ်၊ ၀ဲလက်ကောက်ဝတ် ဖူးရောင်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများ အသီးသီးရရှိခဲ့ပြီး ဓားဖြင့်အထိုးခံ ရသည့် ကိုသန်းဇော်ဦး၏ ၀ဲနံစောင်းတွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ယာဘက်ခါး စောင်းတွင်ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာတစ်ချက်နှင့် နောက်ကျောဝဲဘက်တွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်ရရှိကာ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာ တွင်ပင် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကိုထွန်းနိုင်ဝင်း၏ တရားလိုပြုတိုင်တန်းချက်ကို လှိုင်သာယာ မြို့နယ်ရဲစ ခန်းက (ပ)၈၁၆/၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂/၃၂၅/ ၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး လျက်ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်မေလ ၂၅ ရက်ကလည်း ရည်းစားကိစ္စဖြင့် စကားများရာမှ လူငယ်ငါးဦးက သံပိုက်လုံးဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်သဖြင့် အသက်(၁၉)နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတောင် ဒဂုံမြို့နယ် ပင်လုံခုံးတံတားအနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Apple Retina နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မည့် display များကို Asus နှင့် Sharp မိတ်ဆက်ပြသမည်
Posted by drmyochit Wednesday, June 11, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ,သတင်းများ | No comments
Asus ကုမ္ပဏီသည် Apple ၏ Retina ယှဉ်ပြိုင်မည့် 4K display ပါဝင်သော laptop တစ်မျိုးကို ယခုနှစ် ကုန်ပိုင်းတွင် မိတ်ဆက်ပြသရန် စီစဉ်ထားပြီး Sharp ကုမ္ပဏီကလည်း 8K display ရှေ့ပြေးပုံစံကို ပြသ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Asus Zenbook NX500 တွင် ပါဝင်သည့် ၁၅.၆ လက်မ 3840 x 2160 IPS (in-plane switching) display သည် Quantum Dots ဟုခေါ်သည့် နည်းပညာသစ်ကို အသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း DisplayMate Technologies မှ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ရေမွန်ဆိုနီရာက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ display သည် 2880 x 1800 resolution display ပါဝင်သည့် Apple ၏ ၁၅.၄ လက်မ MacBook Pro နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။
NX500 တွင် Intel-Nvidia platform ကို အသုံးပြုထားပြီး ၎င်းတွင် Core i7 quad-core ပရိုဆက်ဆာနှင့် Nvidia GeForce GTX 850M graphics card တို့ ပါဝင်သည်။ Asus NX500 ကို ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဖြန့်ချိဖွယ်ရှိသည်။
Sharp က မိတ်ဆက်ပြသခဲ့သည့် ရှေ့ပြေးပုံစံ 8K display သည် ၁၃.၃ လက်မ အရွယ်အစားရှိပြီး ၎င်းကို OLED နည်းပညာကို အခြေခံကာ Sharp နှင့် Semiconductor Energy Laboratory တို့ကာ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ 8K display သည် 7680 x 4320 pixel resolution ဖြင့် ဖော်ပြပေးနိုင်ပြီး pixel သိပ်သည်းဆမှာ 664ppi ဖြစ်သည်။ ၁၅.၄ လက်မ MacBook Pro ၏ pixel သိပ်သည်းဆမှာ 220ppi သာရှိသည်။
သမုဒ္ဒရာထဲတွင် ငါးမန်းများနှင့်အတူ ကခုန်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီး
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် အစင်းကျားများ ဆေးခြယ်ထားသည့် ဟန်နာဖရေဆာ အနေဖြင့် ရေကူးဝတ်စုံမှလွဲ၍ အခြား မည်သည့် အကာအကွယ် ကိရိယာ တန်ဆာပလာကိုမျှ ဝတ်ဆင်မထားချေ။ ရေအောက်တွင် သူမ ကခုန်နေချိန်၌ အရှည် (၁၆)ပေမျှ ရှိနေသည့် ငါးမန်းကြီးများ အနီးအနား၌ လှည့်ပတ်ကူးခတ်လျှက် ရှိသည်။
အသက်(၃၈)နှစ်ရှိ မော်ဒယ်လ်သည် အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာအတွင်း ရေအနက် ပေ(၅၀)မျှထိ ငုပ်လျှိုးကာ သဘာဝအတိုင်း ကျက်စားသွားလာနေသည့် ဧရာမ ကျားငါးမန်းကြီးများကြားတွင် မြူးကြွ ကခုန်နေဟန် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျားငါးမန်းများသည် ငါးမန်းဖြူများပြီးလျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသားများကို အန္တရာယ် အပေးနိုင်ဆုံး ငါးမန်းမျိုးစိတ် တစ်ခုအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခံထားရသည်။
ယခုဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်းသည် ငါးမန်းများ၏ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည့် အခြေအနေများကို အဓိက ရည်ရွယ်တင်ပြမည့် Tears ofaMermaid အမည်ရှိ မှတ်တမ်းဗီဒီယို ရိုက်ကူးမှု အစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသားများ၏ ငါးဖမ်းခြင်းနှင့် ဆူးတောင်ဖြတ်တောက်ယူခြင်းတို့ကြောင့် ကျားငါးမန်း အရေအတွက် လျင်မြန်စွာ ယုတ်လျော့ ကျဆင်းလာခြင်းကို မီးမောင်းထိုးပြရန်နှင့် ကျားငါးမန်းများ၏ စစ်မှန်သော ပင်ကိုဗီဇ ဓလေ့စရိုက်များကို ထင်ဟပ်ပြသရန်အတွက် Tears ofaMermaidကို ဖန်တီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘဟားမားစ်တွင် (၅)ရက်ကြာ ရိုက်ကူးရသည့် အဆိုပါ အစီအစဉ် မစတင်မီ ဟန်နာအနေဖြင့် ဗြိတိန်ရှိ သူမ၏ မိသားစုကိုပင် ကြိုတင်နှုတ်ဆက်စကား ပြောကြားထားခဲ့သည်။ ကျားငါးမန်းကြီးများကြား အကာအကွယ် တစ်စုံတစ်ရာ မပါဘဲ ကိုယ်ဟန်ပြ ကခုန်ရမည့် အစီအစဉ်သည် အလွန်အန္တရာယ်များကြောင်း နားလည်ထားသည့်တိုင် ဟန်နာက စွန့်စားကြည့်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံများကို Emmyဆုရှင် ဓာတ်ပုံဆရာ ရှောင်ဟင်းရစ်ခ်ျက ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ရိုက်ကွင်းအဖွဲ့သား အများစုကမူ လှေပေါ်တွင်သာ ကျန်နေရစ်ခဲ့သည်။ (၅)ရက်ကြာ စိတ်ကြိုက်ရိုက်ကူးပြီးမှ မှတ်တမ်းဗီဒီယိုအတွက် စိတ်ကြိုက်တည်းဖြတ်နိုင်မည့် အခြေအနေမျိုး ရရှိလာခြင်းဟု သိရသည်။
“ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်တိုင်း၊ ဗီဒီယို ပြကွက်တိုင်းဟာ တကယ့်ကို ဆန်းကျယ်လွန်းတဲ့ ပုံရိပ်တွေပါပဲ။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှု တစ်ခုအတွက် ရှောင်နဲ့အတူ စွန့်စားကြည့်ဖို့ ကျွန်မ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လေ”ဟု ဟန်နာက ရှင်းပြခဲ့သည်။ သူမသည် (၂)မိနစ်ဆက်တိုက် အသက်အောင့်ထားနိုင်ပြီး ထိုအတောအတွင်း ရေအောက်သို့ ငုပ်လျှိုးကာ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရိုက်ကူးရေး အစီအစဉ်တွင် ကျားငါးမန်းကြီး တစ်ကောင်၏ ဦးခေါင်းကို လက်ဖြင့် ထိခိုက်ပြခဲ့သလို ငါးမန်းများ၏ အမြီးနှင့် ဆူးတောင်များကို ထိတွေ့ ဆော့ကစားပြခဲ့သည့်တိုင် စိတ်ထဲတွင် ကြောက်ရွံ့နေမိကြောင်းလည်း သူမက ဝန်ခံသည်။
“စိတ်ထဲမှာ အရမ်းပဲ တုန်လှုပ်နေမိတယ်။ အထူးသဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ရေငုပ်လိုက်ပြီး ကျားငါးမန်းတွေကို မြင်လိုက်ရတုန်းကပေါ့။ အရေးအကြီးဆုံးက သူတို့ရဲ့ စိတ်အခြေအနေ ဘယ်လိုဘယ်ပုံဆိုတာ နားလည်ထားဖို့ပါ။ ကျားငါးမန်းတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ သူတို့ရဲ့ သွားတွေနဲ့ ပါးစပ်ကို တစ်ခုခု စူးစမ်းကြည့်ဖို့ အသုံးချတတ်တယ်။ အဲဒီလို ကြုံလာရင် ဘယ်လို ရှောင်တိမ်းတတ်ရမယ် ဆိုတာကို နားလည်ရပါမယ်။ ကျွန်မတို့က ရေအောက်မှာ တောက်တောက်ပပ အရောင်မျိုး မဝတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အရောင်တောက်တောက် အဝတ်အစားတွေကို ငါးမန်းတွေ မျက်စိကျသွားနိုင်တယ်”ဟု ဟန်နာက ရှင်းပြခဲ့သည်။
သူမက “ငါးမန်းတွေကို အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အခြေအနေကနေ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ထိကိုင်လို့ ရမလဲ ဆိုတာကို ကျွန်မ ကြိုတင် သင်ယူထားတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းက ချဉ်းကပ်ကြည့်ရင် သူတို့ကို သက်တောင့်သက်သာ ထိတွေ့လို့ ရပါတယ်။ ဒီခံစားချက်ကတော့ တကယ့်ကို အံ့ဩစရာပါပဲ။ နှာခေါင်းနားကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်ပေးရင် သူတို့အရမ်း ကြိုက်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မ သိလာရတယ်”ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံဆရာ ရှောင်ကမူ “ဒီဓာတ်ပုံ ရိုက်ချက်တွေက အရမ်းထူးခြားပါတယ်။ ဟန်နာက ရေငုပ်ကိရိယာ တစ်ခုတစ်လေမှ သုံးမထားဘူး။ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆေးခြယ်မှုပဲ လုပ်ထားတယ်။ အနုပညာ အမြင်အရ အပြည့်စုံဆုံး ဖန်တီးမှု ဖြစ်လာဖို့ပါ။ သူ့အတွက် ရေငုပ်မျက်နှာဖုံး၊ အကာအကွယ် ပစ္စည်းတွေ တစ်ခုမှ မပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဟန်နာဟာ သူကြိုတင် လေ့ကျင့်ထားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရိုက်ချက်တိုင်း အပြစ်အနာအဆာ မရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်”ဟု ချီးကျူးစကား ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဟန်နာက “လူတွေက ကျွန်မကို ဒီကိစ္စမျိုး ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ရတာလဲ၊ အသက်အန္တရာယ် ရှိလောက်အောင် စွန့်စားရတာလဲလို့ မေးခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် သားစား ငါးမန်းတွေကြားမှာ ကိုယ်ဟန်ပြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကို သူတို့ နားမလည်ကြဘူး။ ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ဘယ်လို တိရစ္ဆာန်မဆို ကျွန်မတို့ရဲ့ ဂေဟစနစ်ကြီး မျှတတည်မြဲနေဖို့အတွက် အရေးပါကြတာချည်းပဲလို့ ခံယူပါတယ်။ ငါးမန်းတွေဟာလည်း သမုဒ္ဒရာရဲ့ ဂေဟစနစ်အတွက် အရေးပါတဲ့ သက်ရှိတွေပါ။ လူတွေအနေနဲ့ ပင်လယ်သတ္တဝါတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို ပိုပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် သိလာစေချင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ငါးမန်းတွေကို လူတွေ တွေးတောပုံဖော်တဲ့ အမြင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မက ပိုပြီးတော့ မှန်မှန်ကန်ကန် ရှိစေချင်တယ်လေ။ ငါးမန်းတွေဟာ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့ သက်ရှိတွေပါ။ အကာအကွယ်ပေးဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ တစ်နှစ်ကို ငါးမန်းကောင်ရေ သန်း(၁၀၀)လောက် သတ်ဖြတ်ခံနေရတယ်။ ငါးမန်းကိုက်လို့ သေတဲ့လူက တစ်နှစ်ကို (၁၅)ယောက်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဒီတော့ တကယ်တမ်း ရက်စက်တဲ့ ဖျက်ဆီးရေးသမားတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။ ငါးမန်းလား၊ လူတွေလား”ဟု မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
ကျားငါးမန်းများသည် အရှည်(၁၆)ပေမျှထိ ကြီးထွားတတ်ပြီး သမပိုင်းနှင့် အပူပိုင်းဇုန် သမုဒ္ဒရာများတွင် နေထိုင်ကျက်စားလေ့ ရှိသည်။ ယင်းတို့သည် သမုဒ္ဒရာများ၏ အထင်ကရ ညမုဆိုးများအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး ညပိုင်းအချိန်များတွင် အဓိက အမဲလိုက်လေ့ရှိကာ ငါးများ၊ ဖျံများ၊ ပင်လယ်ငှက်များနှင့် လိပ်များကို ဖမ်းယူစားသောက်လေ့ရှိသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် မိန်းမတစ်ယောက်မှ အိမ်မြှောင် မွေးခဲ့သည် ဟု နာမည်ကြီးနေ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Kupang မြို့အနီးက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်အရာရှိ တစ်ဦးရဲ့ တောင်းဆို မှုကြောင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဟာ မေလအကုန်မှာ Oenunto ရွာ ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
အိမ်မြှောင်တစ်ကောင် မွေးဖွားခဲ့တယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
မေလ ၃၁ ရက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်အရာရှိ Messe Ataupa က “အခြေခံ အားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ တစ်ခုခုတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒါဟာ တမင်တကာ ကြံရွယ်ထားတာလား ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့က စစ်ဆေးမှာပါ။ သားအိမ်ထဲမှာတော့ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ pseudocyesis လို့ ခေါ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မြှောင်မွေးတယ်ဆိုတာ အလိမ်အညာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားသတ္တဝါမျိုးစိတ်ကို မွေးတယ်ဆိုတာ သိပ္ပံပညာနယ်ပယ်မှာ မှတ်တမ်းမရှိသေးပါဘူး” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာ Messe Ataupa ပြောတဲ့ pseudocyesis ဆိုတာဟာ လူတစ်ယောက်က ဗိုက်ကြီးနေပြီလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်နေပြီး ဗိုက်ကြီးတဲ့ လက္ခဏာတွေလည်း ပြသလာပေမဲ့ အထဲမှာ သန္ဓေသားမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းများရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ Debi Nubatonis လို့ခေါ်တဲ့ ဒီမိန်းမဟာ ကိုယ်ဝန်ရှစ်လထိ လွယ်ခဲ့တာကို ဒေသခံတွေက တွေ့ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မေ ၃၀ ရက်နေ့မှာ Debi ဟာ ဗိုက်နာလာခဲ့ပြီး ဆေးရုံနဲ့ဝေးလွန်းတာကြောင့် အရပ်လက်သည်နဲ့ မွေးခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ အရပ်လက်သည်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Josephine Lydia Hellen Wadu က အင်ဒိုနီးရှားသတင်းဆိုက်ဒ် Kompas ကိုပြောကြားရာမှာ သူဟာ မွေးခါနီးမှ ရောက်သွားခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
မျှော်လင့်ထားတဲ့ ကလေးအစား ချွဲတွေ သွေးတွေနဲ့ရောပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြားက အိမ်မြှောင် တစ်ကောင် ထွက်လာတယ်လို့ Josephine က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခုခုတော့ဖြစ်ပြီလို့ တွေးမိသွားတဲ့ Josephine ဟာ မိခင်ကော မွေးခင်းစ အိမ်မြှောင်ကိုပါ Oenunto ကျန်းမာရေးစင်တာ ကို သယ်သွားခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်သတင်းဆိုက်ဒ် Byokan Sunday ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Debi ရဲ့ အိမ်နီးနားချင်းတွေက သူမနဲ့သူမရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာ စုန်းအတတ်ကို လိုက်စားကြတယ် လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိဒီသတင်းဟာ အတည်မပြုနိုင်သေးပေမဲ့ ဒေါက်တာ Messe Ataupa တို့အဖွဲ့ရဲ့ စစ်ဆေးမှုကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့်သွားမယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား သတင်းဆိုက်ဒ် TOPIK ANTV က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဒီသတင်းကို အောက်ကလင့်ခ်မှာ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Brave Millie Barker ဆိုတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ကလေး မလေးဟာ အရှင်လတ်လတ် ကျောက်တုံးဖြစ်ရတော့မယ့် အန္တရယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
fibrodysplasia ossificans progressive လို့ခေါ်တဲ့ အလွန်ရှားပါးတဲ့ မျိုးဗီဇ ရောဂါတစ်မျိုးကို သူဟာ ခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
stone man syndrome(လူကျောက်တုံးရောဂါ)လို့လဲ ခေါ်ဆိုတဲ့ ဒီရောဂါဟာ ကြွက်သားတစ်ရှုးတွေနဲ့ အရွတ်ကြောလိုမျိုး အရာတွေကပါ အရိုးတွေအဖြစ် ဖွဲ့စည်းလာပြီး လှုပ်လို့မရတော့တဲ့အထိ ဖြစ်သွားတာပါ။
တိုက်မိတာ၊ ချော်လဲတာ၊ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ ရတာတွေအားလုံးဟာ အရိုးတွေကို ပိုမိုကြီးထွားလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမလေးရဲ့အမေ Lorraine Turner က “ကျွန်မပါးစပ်ထဲ ကျွန်မအသက်ကိုထားပြီး သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်။ ဖြည်းဖြည်းသက်သာ နေပြီး ဂရုစိုက်ဖို့ သူ့ကို တစ်ခါပြောတိုင်း တစ်ပေါင် သာရမယ်ဆိုရင် ကျွန်မသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်နေပြီ“ လို့ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ထို့အပြင် ၃၄ နှစ်အရွယ် Lorraine က “သူက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရယ်နေတတ်တဲ့ ကောင်မလေးပါ။ သူကြီးလာတဲ့အခါ သူ့အခြေအနေကို ရှင်းပြရမှာ ကြောက်တယ်“ လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီရောဂါခံစားရသူတွေဟာ အသက် ၄၀ ထက်ပိုမနေရပါဘူး။
ကျွမ်းကျင်သူတွေက ကြိုးစားရှာဖွေနေပေမဲ့ ဒီရောဂါကို ကုသနိုင်ခြင်းလည်းမရှိသေးပါဘူး။
ကလေးမလေး Millie ရဲ့ ခြေမတွေဟာ အထဲကို ကုတ်ဝင်သွားရာကနေ ဆရာဝန်တွေဟာ သတိပြုမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့အခြေအနေက အလွန် ရှားပါးတာကြောင့် ကုသလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
Oxford တက္ကသိုလ်က ဒီရောဂါကို ကုသဖို့ လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ အောင်မြင်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာလို သေးတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီး ရဲမေအချို့ကို ရန်ကုန်ရှိ စားသောက် ဆိုင်ကြီးများ ၌ ညပိုင်းတွင် စားပွဲထိုးများ အသွင်ဖြင့် သုံးယောက်တစ်တွဲ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည်ကို မြင်တွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တရုတ်ရဲမေများသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြား ဘာသာ တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာ ဘာသာနှင့် စကားလာရောက် သင်ကြားနေသည့် သူများ ဖြစ်ကြောင်း လက်ရှိတွင် တရုတ် ရဲမေ ၂၉ ဦး သည် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာဘာသာ သင်ကြားလျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
တောင်တရုတ်ပင်လယ် ရေပိုင်နက် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက ကျွန်းတုများ တည်ဆောက်နေ
စပရတ်လီကျွန်းစုရှိ ဗီယက်နမ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ကျွန်းငယ်လေးတစ်ကျွန်း
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး တင်းမာမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရေးအတွက် လက်နက်သစ်များအဖြစ် သဲ၊ ဘိလပ်မြေ၊ သစ်သားနှင့် သံမဏိတို့ကို အသုံးပြုနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယခုအခါ တရုတ်နိုင်ငံသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသရှိ ဒူဘိုင်းတွင် ဆောက်လုပ်ထားသည့် ကျွန်းတုများ ပုံစံမှီငြမ်းပြီး တောင်တရုတ် ပင်လယ်တွင်လည်း ကျွန်းတုများ ဆောက်လုပ်ရန် စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဟု Bloomberg Businessweek သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
တရုတ်သင်္ဘောများသည် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ သယ်ယူကာ ပိုင်နက် အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပေါ်နေသည့် စပရတ်လီ ကျွန်းများအနီးတွင် နေရာချလျှက် ရှိသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်းတုများ ဆောက်လုပ်သွားရန်ဖြစ်ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် တောင်တရုတ် ပင်လယ်ပြင်၏ သဘာဝအတိုင်း ရှိနေသော အခြေအနေများကို ပြင်ဆင်ကာ နယ်နိမိတ်သစ် သတ်မှတ်တောင်းဆိုရန်ဖြစ်မည်ဟု ဆိုသည်။
“သူတို့တွေက အရင်တုန်းက ကမ္ဘာ့မြေပုံမှာ လုံးဝ မရှိခဲ့တဲ့ ကျွန်းတွေကို အတုပြုလုပ် ဖန်တီးနေတာပါ။ ဒူဘိုင်းမှာ ဆောက်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါပဲ”ဟု လူဦးရေ ကျဲပါးစွာ နေထိုင်ပြီး တရုတ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့ ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေသည့် ကျွန်းငယ်တစ်ခုမှ အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိ ယူဂျီနီယိုဘီတိုအိုနွန်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဘီတိုအိုနွန် တာဝန်ယူထားသည့် ဒေသကို ဖိလစ်ပိုင်တို့က ကာလေယန်းဟုခေါ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်မှာ “လွတ်လပ်ခြင်း”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
၎င်းက “ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေက အကြီးကြီးတွေ။ ပြီးတော့ မရပ်မနား ဆက်တိုက်လုပ်နေကြတာ။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေ တရုတ်နိုင်ငံ အနေနဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ် တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံ ထိန်းချုပ်သွားနိုင်လောက်တယ်”ဟုလည်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
လေ့လာသူများကလည်း ကျွန်းတုများသည် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အခြေချ နယ်မြေသစ်များ ဖြစ်လာပြီး ရေပိုင်နက် ထိန်းချုပ်မှုများအတွက် တောင်းဆိုရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုထားကြသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းအရ ကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံး ရေလမ်းကြောင်း အချို့ကိုပင် တရုတ်က တောင်းဆိုလာနိုင်ဖွယ် ရှိနေသည်။
စပရတ်လီ ကျွန်းစုများတွင် ကျွန်းငယ်နှင့် သန္တာကျောက်တန်း စုစုပေါင်း (၁၀၀)ကျော် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနေပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်၏ တောင်ပိုင်းဒေသတွင် တည်ရှိသည်။
ယင်းကျွန်းစုများ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတွက် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံအများအပြားက အပြိုင်အဆိုင် တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီး ကျွန်းစု၏ အစိတ်အပိုင်းအလိုက် ထိုင်ဝမ်၊ ဘရူနိုင်း၊ မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် တရုတ်တို့က နယ်မြေအလိုက် ခွဲခြားထိန်းချုပ်ထားသည်။
စပရတ်လီ ကျွန်းစုများကို တရုတ်နိုင်ငံက မိမိတို့ပိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး နန်ရှာဟု အမည်ပေးထားသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ကျွန်းစုများ အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဇွန်လဆန်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိ ဟွန်လိုင်က “ဒီကျွန်းစုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်က လုပ်ဆောင်နေသမျှ အားလုံးဟာ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်ဆိုင်မှု ဘောင်ထဲကချည်းပဲ။ ဖိလစ်ပိုင် အနေနဲ့ ဒီကိစ္စမှာ ဘာမှ ဝင်ပါခွင့် မရှိဘူး”ဟု ၎င်းတို့၏ သဘောထားကို ယတိပြတ် ပြောဆိုထားသည်။
_Ref: Bloomberg Businessweek
Posted by drmyochit Wednesday, June 11, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ဇွန် ၁၀ ရက်ညပိုင်းက မဟာသန္တိသုခကျောင်းရှိ သံဃာတော်များအား နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့ဝင် သံဃာတော် များနှင့် တာဝန်ရှိသူအချို့က လာရောက် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားခဲ့သည်။ [ဓာတ်ပုံ- ဂျေမောင်မောင် (အမရပူရ)]
မဟာသန္တိသုခကျောင်းတိုက်ကို တိုင်းသံဃနာယက ဆရာတော်များ ဦးဆောင်၍ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စုစုပေါင်း အင်အားတစ်ထောင်ခန့်ဖြင့် ဇွန်လ ၁၀ ရက် ည ၁၁ နာရီအချိန်တွင် ကျောင်းတိုက်ကို ၀င်ရောက်စီးနင်း၍ သံဃာတော်များအား ဖယ်ရှားပြီး ကျောင်းတိုက်ကို ချိတ်ပိတ်လိုက်သည်။
တာမွေမြို့နယ် နတ်ချောင်းရပ်ကွက်ရှိ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေသည့် ပီနန်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းထိုင်သော မဟာသန္တိသုခကျောင်းတိုက်အား ချိတ်ပိတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကျောင်းကို ဖယ်ရှား ချိတ်ပိတ် ချိန်တွင် ပီနန်ဆရာတော်ကြီးသည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပီနန်ဆရာတော်ကြီး ဂျပန်သို့ သာသနာပြန့်ပွားရေးအတွက် ခရီးထွက်နေစဉ် ၀င်ရောက် ချိတ်ပိတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သီတင်းသုံးနေသော ဆရာတော် ကိုးပါးနှင့် ကပ္ပိယ လေးဦးတို့ကို ကမ္ဘာအေးဘုရားဝင်းသို့ ပင့်ဆောင်ခေါ်ယူသွားကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍ၀ံသက မိန့်ကြားသည်။
‘‘ညနေ ၃ နာရီလောက်က ရုပ်ရှင်ငှားတဲ့ သူတို့ဘက်က သူတွေကိုလာခေါ်သွားပြီး ည ၈ နာရီမှာ ရဲကား ခြောက်စီး နဲ့ ၀င်လာတယ်။ ပြီးတော့ ချိတ်ပိတ်မယ်ဆိုပြီး ပီနန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တပည့်တော်ကို ရှာတယ်။ မနက် ၁ နာရီလောက်မှာ လူတွေကလည်း တအားများလာတော့ နှစ်နာရီလောက်မှာ အပြီးခေါ် သွားကြ တယ်’’ ဟု ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍ၀ံသက မိန့်ကြားသည်။
သံဃာတော်များအား ဖယ်ရှားသော တာဝန်ရှိသူများသည် ကျောင်းတိုက်ကို ဖယ်ရှားပြီး ကျောင်းအတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ ကို သယ်ဆောင်သွားကာ ကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိနေသော သံဃာတော် ၁၅ ပါးဝန်းကျင်အား ကမ္ဘာအေး ဘုရားဝင်းရှိ ကျောင်းတိုက်အတွင်းသို့ ည ၁ နာရီခွဲအချိန်တွင် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ဖယ်ရှားရာတွင် ပါဝင်သော တာဝန်ရှိသူများထံ မီဒီယာများက မေးမြန်းရာ ဖြေဆိုခြင်းမရှိသလို၊ ကျောင်းတိုက် အတွင်းသို့ မီဒီယာများ ၀င်ရောက်ခွင့် မပေးခဲ့ပေ။ ကျောင်းတိုက်ကို ဖယ်ရှားသောကြောင့် ပီနန် ဆရာတော်ကြီး၏ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ ကျောင်းတိုက်ရှေ့သို့ လာရောက်၍ အော်ဟစ်ဆူညံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ သည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းသံဃနာယက ဆရာတော်များနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ များက ယနေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီတွင် ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေရှိ ကျောင်းတိုက်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။
Posted by drmyochit Wednesday, June 11, 2014, under ဟာသ | No comments
မိန်းမဖြစ်သူက ရေချိုးခန်းမှ ထွက်လာပြီးနောက်.. ယောကျာင်္းဖြစ်သူက ရေချိုးခန်း အတွင်းသို့ ရေချိုးရန် ဝင်သွားလေသည်။
ထိုအခိုက် တံခါးခေါင်းလောင်းသံ မြည်လာသည်။
မိန်းမဖြစ်သူလည်း ရေချိုးခန်းသုံး တစ်ဘက်စောင်ကို ကမန်းကတန်း ပတ်ကာ အိမ်အောက်ထပ်သို့ ခပ်လောလော ပြေးဆင်းလိုက် သည်။
တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ရာ တစ်ဖက်အိမ်မှ ” ဦးရှမ်း” ဖြစ်နေသည်။
သူမက ဘာမှ မပြောရသေးခင် ဦးရှမ်းက..
” ကျေးဇူးပြုပြီး တစ်ဘက်စောင် ကို ဖယ်ပေးပါ.. ငါးသောင်း ပေးပါ့မယ်..” ဟု ဆိုလေ၏။
သူမ ခဏမျှ မှင်တက်သွားပြီး.. ဦးရှမ်းရှေ့တွင် တစ်ဘက်စောင်ကို ဖယ်ပြပြီး.. ခေတ္တရပ်နေလိုက်သည်။
စက္ကန့်အနည်းငယ် ကြာပြီးနောက် ဦးရှမ်းက ငွေငါးသောင်းကို ကမ်းပေးလိုက်ပြီး.. တိတ်ဆိတ်စွာ ထွက်ခွါသွားသည်။
မိန်းမဖြစ်သူလည်း တစ်ဘက်စောင်ကို အမြန်ပြန်ဝတ်ခါ ဝမ်းသားအားရ အပေါ်သို့ ပြန်တက်လာသည်။
ရေချိုးခန်းနား အရောက်တွင် အထဲမှ ယောကျာင်္းဖြစ်သူက…
” ဘယ်သူလည်း..” ဟု မေးသည်။
” ဟိုဘက်အိမ်က.. ဦးရှမ်းပါ…”
“အေး..ကောင်းတယ်..သူ့ဆီမှာ ငါရစရာ ငါးသောင်းရှိတယ်.. ဒီနေ့လာပေးမယ် ပြောထားတာ.. ပေးသွားသေးလား..? ”
” ရှမ်…!!!! ”
(by; original writer)
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း ၀င်းအတွင်း စွဲနေသော တောကြီးပျားအုံကို မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဖယ်ရှား
ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက်ရှိ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဝင်းအတွင်း အဆောက်အအုံတွင် စွဲနေသော တောကြီးပျားအုံကို မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖယ်ရှားနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − ကိုဇေ)
ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေ တောင်ကြားရပ်ကွက်၊ မြန်မာ့ရုပ် ရှင်လုပ်ငန်းဝင်းအတွင်းရှိ အ ဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် အုံဖွဲ့နေ သော သုံးပေပတ်လည် အရွယ် ရှိသည့် တောကြီးပျားအုံကို မြို့ နယ်မီး သတ်တပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးဖြင့် သွားရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ ရသည်။
‘‘ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဝင်းထဲက လူတွေက အကြောင်းကြားလို့ ပိုး သတ်ဆေးနဲ့ သွားရှင်းတာ။ အ ကောင်ရေ ထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိမယ် ထင်တယ်။ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ ဖျန်းလိုက်တော့ သေတဲ့အကောင်တွေလည်းသေ၊ ပျံပြေးတဲ့ အကောင်တွေလည်း ပြေးပေါ့။ ရတဲ့အုံကိုတော့ လူကြီးတွေပြဖို့ တိုင်းရုံးကို ပို့ထားတယ်’’ဟု တောကြီးပျား အုံရှင်းလင်းရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သည့် ဗဟန်းမြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဒုတိယဦးစီးမှူးအဆင့်ရှိ မီးသတ်အရာရှိတစ်ဦးကပြောသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီး အကောင် ကြီးနှင့် သားလောင်းများ ထောင် နှင့်ချီ၍ ရှိနေသည့် တောကြီးပျား အုံသည် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဝင်းအတွင်း ရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းများ ထားသော စတိုခန်းအပြင်ဘက် တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် အဲကွန်း နှင့် တိုက်နံရံကြားတွင် အုံဖွဲ့နေ ခြင်းဖြစ်သည်။ အကောင်ကြီးများ နေ့စဉ် ပျံသန်းနေသောကြောင့် ၀င်းအတွင်း နေထိုင်သူများက မီး သတ်တပ်ဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြား ခဲ့ပြီး မီးသတ်အရာရှိ သုံးဦးနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင် ဆယ်ဦးတို့က လာရောက်ရှင်းလင်းပေးခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
‘‘ဆေးဖျန်းလိုက်တော့ အ ကောင်ကြီးတွေက ပျံပြေးတယ်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို ခပ်ဝေးဝေးမှာ နေခိုင်းရတယ်။ ဆေးဖျန်းထားတာတောင် ရာနဲ့ ချီတဲ့ သားလောင်းတွေက မသေး သေးဘဲ လှုပ်နေတုန်း’’ဟု ဗဟန်း မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ကပြောသည်။
တောကြီးပျားအုံကို မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ ရှင်းလင်းခဲ့ရသည့်ဖြစ် စဉ်ကို အသေးစိတ်ပြောပြရန်မူ အဆိုပါခြံဝင်းအတွင်းရှိ တာဝန် ရှိသူများက ငြင်းဆိုသည်။ ယခု တောကြီးပျားအုံအပါအ၀င် ရန် ကုန်မြို့တွင် ယခုနှစ်အတွင်း တောကြီးပျားနှင့် ပျားတူအုံလေးအုံ ရှင်းလင်းခဲ့ရပြီးဖြစ်ကြောင်း ရန် ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီး ဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ပျားတူနှင့် ပျားကြီးကောင် တုပ်သောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် လေဖြတ်ဝေဒနာရှင်တစ်ဦး သေဆုံးကာ ကလေးငယ်နှစ်ဦးနှင့် အမျိုးသား သုံးဦးဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသခဲ့ရသည်။
တောကြီးပျားနှင့် ပျားတူကဲ့သို့ သော အင်းဆက်ပိုးများသည် တိုက်ကြို၊ တိုက်ကြားများ၊ သစ် ပင်အခေါင်းများနှင့် အမှိုက်ပုံများ တွင် အိမ်ဖွဲ့နေထိုင်ပေါက်ဖွား လေ့ရှိပြီး အကိုက်ခံရပါက အဖု အပိမ့်များထွက်၍ ယားယံကာ ပရုတ်ဆီနှင့် မလူးမိစေရန် လိုအပ် ကြောင်း၊ ပရုတ်နှင့် ထိတွေ့မှသာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်၍ ကိုယ် ခန္ဓာတွင် အဆိပ်ပြန့်ပွားသွားပါက အသက်သေဆုံးသည်အထိ အန္တ ရာယ်ကြီးကြောင်း၊ သုတ်သင် ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ လုပ် ဆောင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာတာ ၀န်ရှိသူများနှင့် တိုင်ပင်၍ အခြား နေရာများသို့ ပျံ့နှံ့မသွားစေရန် ၎င်းတို့နေထိုင်ကျက်စားရာနေရာ တစ်ဝိုက်ကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းရှင်းလင်းသင့်ကြောင်း ကျောက်ဆည်ခရိုင်တိမွေးကုဦးစီးအရာရှိ ဒေါက်တာ သိဏ်းနိုင်က အကြံပြုသည်။
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အလက်ဆကာမှ လမ်း သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်များ
ယာဉ်မောင်းများအတွက် သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်တွေ အများအပြား ရှိပေမယ့် အခုဖော်ပြပေးမယ့် သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်တွေကတော့ သူမတူအောင် ကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ လူကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင်ကြီးတွေ ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ အခြား အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ ရှိတဲ့အကြောင်း ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီး သတိပေးထားတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
အလက်ဆကာ ဟိုတယ်တစ်ခုဟာ လမ်းတလျှောက် ယာဉ်မောင်းတွေ ဂရုပြုသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးမယ့် တမူထူးခြားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်အတွဲလိုက်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပေးခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ဟိုတယ်ဟာ McKinley တောင် အပါအ၀င် ဒီနာလီ အမျိုးသား ပန်းခြံနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အကွာအဝေးမှာ တည်ရှိပါတယ်။
အလက်ဆကာပြည်နယ်၊ ဒီနာလီမှာ ရှိတဲ့ Grande Denali Lodge ကို ဦးတည်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ Grande Drive အမည်ရ လမ်းဆိုးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီ လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ အုန်းသီးကြွေကျနိုင်သည်။ သတိထားရန် နဲ့ ဖရီးဝေး မရှိတော့ဘူး စတဲ့ ထူးခြားတဲ့ လမ်းဆိုင်းဘုတ်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ့အပြင် ထူးခြားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကတော့ ခြင်အကြီးကြီးတစ်ကောင်က လူကို မချီ ပျံသန်းသွားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်မျိုးနဲ့ သမင်အကြီးစား တစ်ကောင်က ကားကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ပုံစံကဲ့သို့ ဆိုင်းဘုတ်မျိုးတွေလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ လမ်းဟာ အတော့်ကို စွန့်စွန့်စားစား သွားရမယ့် လမ်းမျိုးဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် တစ်ခြား လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေ ထပ်ထပ်တိုးလာခဲ့ပြီး ဒါဟာ မပြီးဆုံးနိုင်သေးဘဲ နောက်ထပ် ဘယ်လို လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေ ထပ်တိုးလာဦးမယ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
သားအမိနှစ်ဦးကို ကားဖြင့် တိုက်ထွက်ပြေးသူကို ၀ိုင်းဝန်း ဖမ်းဆီး
၉.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ည ၉နာရီ၃၅မိနစ် ၀န်းကျင်ခန့်က မန္တလေး မြို့ ၆၂လမ်းနှင့်သိပ္ပံလမ်း မီးပွိုင့်အနီးတွင် မြောက်မှတောင်သို့ သားအမိနှစ်ဦး စီးနင်းလာသော ဆိုင်ကယ်အား ဖိုးဝှီးအမျိုးစား ကားတစ်စီးမှ နောက်မှ ၀င်တိုက်ခဲ့ရာ ဆိုင်ကယ်နောက်မှ ထိုင်လိုက်လာသူ ၇တန်းကျောင်းသူလေးမှာ နေရာတွင်ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ပြီး ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူ မိခင်မှာလဲ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။
ဖိုးဝှီးမောင်းနှင်သူမှာ အခင်းဖြစ်ချိန်က ကားအား ရပ်တန့်ပေးခြင်းမရှိပဲ အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့် ဆက်လက်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားရာ ၄င်းကားနောက်သို့ အခင်းဖြစ်ပွားရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများ ၀ိုင်းလိုက်ခဲ့ရာ ၆၂လမ်းအရိုးဆေးရုံအနီးတွင် ဆရာဝန်တစ်ဦးမောင်းနှင် လာသောကားမှ အရှေ့မှ ကန့်လန့်ခံပိတ်ပေးလိုက်ရာ မှ အဆိုပါကန့်လန့်ခံ ပိတ်သောကားအား ဆက်လက်တိုက်မိပြီးလမ်းဘေးသို့ဘေးစောင်းလဲသွားခဲ့သည် ....။
တာဝန်ရှိသူများ အချိန်မှီရောက်ရှိလာပြီး တိမ်းမှောက်သွားသောကားအား ကရိန်းဖြင့် ဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားနေစဉ် စာနာမှု့ကင်းမဲ့စွာ မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသော ယာဉ်မောင်းအပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအုပ်ကြီးမှ ဒေါသထွက်ရှိပြီး တိုက်ပြေးသောကားအား ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့သည် ။
အဆိုပါခဲများဖြင့် ၀ိုင်းပစ်ပေါက်မှုကြောင့် ဖိုးဝှီးကားရှေ့မှန်နှင့်ဘေးတံခါးမှန်များ ကွဲသွားခဲ့ပြီး အဆိုပါကားအား လာရောက်သယ်ဆောင်သော ကရိန်းကားဘေးမှန် နှင့် ၇ဲအချုပ်ကားတစ်စီး ရှေ့မှန်တို့ခဲမှန်ကွဲကြေသွားခဲ့သည် ။
တာဝန်ရှိသူများမှ ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်ကြီးအား တရားခံအား ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပြီး ခဲများဖြင့် မပစ်ပေါက်ရန် မေတ္တာ ရပ်ခံကာ တိုက်ပြီးထွက်ပြေးသောကားအား ကရိန်းဖြင့် မသယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည် ။
သတင်း / ဓါတ်ပုံ - ကပ္ပိယ သာဂိ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ Karachi နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာ တာလီဘန်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၃၆ ယောက်ထက်မနဲ သေဆုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် ဒီကနေ့ အင်္ဂါနေ့မှာလည်း လေဆိပ်နားမှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ရဲတွေက ပြောပါတယ်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လ်နဲ့ လာတဲ့ သေနတ်သမား အနည်းဆုံး ၂ ယောက်က လေဆိပ်လုံခြုံရေး သင်တန်းကျောင်းကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ တပ်သားတွေရဲ့ ပြန်လှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ လေဆိပ်လုံခြုံရေးတပ်က လက်ထောက်အကြီးအကဲ ဗိုလ်မှူးကြီး Tahir Ali က ပြောပါတယ်။ ဒီ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။
တိုက်ခိုက်လာသူတွေကို ရှာဖွေတဲ့ စစ်ဆင်ရေး စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီလို့လည်း ဗိုလ်မှူးကြီး အလီက ပြောပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့ တိုက်ခိုက်မှုကို သူတို့ လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ကြောင်း ပါကစ္စတန် တာလီဘန်တွေက ကြေညာခဲ့ပြီး ထပ်မံ တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်မယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
Karachi က Jinnah နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကို တာလီဘန်တွေ ၅ နာရီကြာ သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့နောက် တနင်္လာနေ့ အစောပိုင်းမှာတော့ ပြန်လည် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို စီးပွားရေး အချက်အခြာကျတဲ့ တောင်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့က လေဆိပ်မှာ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာမို့ ပါကစ္စတန် ဝန်ကြီးချုပ် Nawaz Sharif ဟာ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိတွေနဲ့ အင်္ဂါနေ့မှာ တွေ့ဆုံပြီး လုံခြုံရေးအခြေနေတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် စစ်တပ်က အင်္ဂါနေ့မှာပဲ စစ်သွေးကြွတွေ ခိုအောင်းမယ်လို့ သံသယရှိတဲ့ အနောက်မြောက်ပိုင်းက ခိုင်ဘာဒေသကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာမို့ အကြမ်းဖက်သမား ၂၅ ယောက်ထက်မနဲ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by drmyochit Wednesday, June 11, 2014, under မြန်မာနယ်စပ်သတင်းများ | No comments
နေပြည်တော်မှာ ရောက်နေတဲ့ ဘင်္ဂလား နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ် အဇစ်နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ နယ်ခြား ပြဿနာအရေး ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြဿနာတွေကို အပြုသဘောနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့သူ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဦးစီးအရာရှိချုပ် ရဲမှူးချုပ် ဝင်းခေါင်က ပြောပါတယ်။ နှစ်ဖက်အကြားမှာ ငြင်းခုန်မှု မရှိဘူးလို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
နှစ်ဖက် ပစ်ခတ် သေဆုံးမှုတွေ နောင်မှာ မဖြစ်ပွားအောင် နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်း သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ တပ်မှူးတွေလည်း ပါဝင်တဲ့ အတွက် ပြဿနာကို အောက်ခြေအထိ နားလည်မှု ရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ပြဿနာတွေ ကြီးကျယ်ရတာဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မီဒီယာတွေက လှုံ့ဆော်ရေးသားလို့ ဖြစ်ရတယ်လို့လည်း ရဲမှူးချုပ် ဝင်းခေါင်က အပြစ်တင် ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင် သူပုန်ကိစ္စ အပါအဝင် ထွက်ပေါ်လာမယ့် ရလဒ်တွေကိုတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဆွေးနွေးပွဲ အပြီးမှ တိတိကျကျ သိရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နှစ်ဖက် သတင်းဖလှယ်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ ပြဿနာတွေကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်မယ် လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
Posted by drmyochit Wednesday, June 11, 2014, under မုဒိမ်းမှု | 1 comment
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ တိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးက ၎င်း၏ ရည်းစားဖြင့် ခိုးရာလိုက်ပြေးလာစဉ် ရည်းစားဖြစ်သူ၏ ဦးလေးက အဓမ္မပြုကျင့်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဇွန်လ ၈ ရက်၊ ည ၁၁ နာရီခွဲဝန်းကျင်က တိုက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။